Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Jeremiah 15
Nepali New Revised Version, Jeremiah 15
1 तब परमप्रभुले मलाई भन्‍नुभयो: “मोशा र शमूएल मेरो सामुन्‍ने खड़ा भए तापनि यस जातितिर मेरो मन फर्कनेछैन। तिनीहरूलाई मेरो सामुन्‍नेबाट निकालिदे। तिनीहरूलाई जान दे!
2 अनि ‘हामी कहाँ जाऔं?’ भनेर यदि तिनीहरूले तँलाई सोधे भने, तैंले तिनीहरूलाई यसो भन्‌, ‘परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: मृत्‍युको लागि लेखिएका भए मृत्‍युमा नै, तरवारले मारिनेहरू तरवारतिरै जाऊन्‌, भोकले मर्नेहरू भोकले नै मरून्‌, कैदमा लगिनेहरू कैदमा नै जाऊन्‌’।
3 “म तिनीहरूका विरुद्धमा चार किसिमका सर्वनाश गर्नेहरू पठाउनेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “मार्नलाई तरवार, तानेर लैजानलाई कुकुर, आकाशका पन्क्षीहरू र पृथ्‍वीका पशुहरूचाहिँ निल्‍न र नाश गर्नलाई।
4 यहूदाको राजा हिजकियाको छोरो मनश्‍शेले यरूशलेममा जे गरेको थियो त्‍यसैको कारण म तिनीहरूलाई पृथ्‍वीका सारा राज्‍यहरूमा एक घिनलाग्‍दा कुरा तुल्‍याउनेछु।
5 “हे यरूशलेम, कसले तँलाई टिठ्याउने? तेरो निम्‍ति कसैले शोक गर्नेछ? तिमीहरू कस्‍ता छौ भनी सोध्‍नलाई को अड्‌नेछ र?
6 तैंले मलाई त्‍यागेको छस्‌,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ। “तँ पछि नै हट्‌दैरहन्‍छस्‌। यसैले मैले मेरो हात उठाएर तँलाई सर्वनाश गर्नेछु। म तँमाथि अझ टिठ्याउन सक्‍दिनँ।
7 म तिनीहरूलाई देशका सहरहरूका मूल ढोकाहरूमा नाङ्‌लोले निफनेझैँ निफन्‍नेछु। म मेरो प्रजामाथि शोक र सर्वनाश ल्‍याउनेछु, किनकि तिनीहरूले आफ्‍ना चाल बदली गरेनन्‌।
8 म तिनीहरूका विधवाहरूको संख्‍या समुद्रका बालुवाको संख्‍याभन्‍दा धेरै बनाउनेछु। मध्‍यदिनमा तिनीहरूका जवान मानिसहरूका आमाहरूका विरुद्धमा एउटा सर्वनाश गर्नेलाई ल्‍याउनेछु। शोक र त्रास एक्‍कासि म तिनीहरूमाथि ल्‍याउनेछु।
9 सात जनाकी आमा बेहोश भई मर्नेछे। दिन छँदै त्‍यसको सूर्य अस्‍ताइहाल्‍नेछ। त्‍यो अपमानित भई लाजमा पारिनेछे। तिनीहरूमा बचेकाहरूलाई चाहिँ म तिनीहरूका शत्रुहरूका सामु तरवारले काट्‌न लाउनेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
10 हाय, मेरी आमा, किनकि तपाईंले मलाई जन्‍म दिनुभयो, मजस्‍तोलाई, जोसँग सारा देश झगड़ा र विवाद गर्छ। मैले न त ऋण दिएको छु, न ऋण लिएको छु, तापनि सबै जना मलाई सराप्‍छन्‌।
11 परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “निश्‍चय नै म तँलाई एउटा राम्रो अभिप्रायले छुटाउनेछु। निश्‍चय नै म दु:ख र सङ्कष्‍टको समयमा तेरा शत्रुहरूलाई तँसँग बिन्‍ती गर्न लाउनेछु।
12 “के एउटा मानिसले फलाम भाँच्‍न सक्‍छ र– उत्तरको फलाम वा काँसालाई?
13 तिमीहरूको देशभरि आफ्‍ना सबै पापहरूले गर्दा तिमीहरूका धन-सम्‍पत्ति र तिमीहरूका भण्‍डारका माल सित्तैँमा म लूटको मालझैँ बाँड़िदिनेछु।
14 म तिमीहरूलाई आफैले नचिनेको देशमा आफ्‍ना शत्रुहरूका कमारा तुल्‍याउनेछु। किनभने मेरो रीसले एउटा आगो सल्‍काउनेछ, जो तिमीहरूका विरुद्धमा निरन्‍तर जलिरहनेछ।”
15 हे परमप्रभु, तपाईं बुझ्‍नुहुन्‍छ, मलाई सम्‍झनुहोस्‌, र मेरो वास्‍ता गर्नुहोस्‌। मेरो निम्‍ति मलाई सताउनेहरूसित बदला लिनुहोस्‌। तपाईं धैर्यवान्‌ हुनुहुन्‍छ, मलाई नलैजानुहोस्‌। तपाईंको खातिर मैले कति गाली सहें, सो सम्‍झनुहोस्‌।
16 जब तपाईंका वचनहरू आए ती मैले खाएँ, ती मलाई रमाहट, र मेरो हृदयलाई आनन्‍द दिने कुरा भए, किनकि तपाईंको नाउँले म कहलाइन्‍छु, हे सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु परमेश्‍वर।
17 मोजमज्‍जा गर्नेहरूको झुण्‍डमा म कहिल्‍यै बसिनँ, न त तिनीहरूसँग मैले हर्ष मनाएँ। म त एकलै बसें, किनभने तपाईंको हात ममाथि थियो र तपाईंले मलाई क्रोधले भरिदिनुभएको थियो।
18 मेरो दु:ख किन थामिँदैन? र मेरो चोट किन कष्‍टकर र निको नहुने भएको छ? के तपाईं मेरो लागि धोका दिने खोलाझैँ, पानी नआउने मुहानझैँ हुनुहुनेछ?
19 यसैकारण परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “यदि तैंले पश्‍चात्ताप गरिस्‌ भने, म तँलाई फेरि स्‍थापित गर्नेछु, कि तैंले मेरो सेवा गर्न सकोस्‌। यदि तैंले चाहिँदो कुरा बोलिस्‌ र व्‍यर्थका कुरा गरिनस्‌ भने, तँ मेरो वक्ता हुनेछस्‌। यी मानिसहरू तँतिर फर्कून्‌, तर तँचाहिँ तिनीहरूतिर नजानू।
20 म तँलाई यस प्रजाको निम्‍ति काँसाको बलियो किल्‍ला भएको पर्खाल बनाउनेछु। तिनीहरू तेरो विरुद्धमा लड़ाइँ गर्नेछन्‌, तर तँमाथि विजयी हुनेछैनन्‌, किनकि तँलाई बचाउन र उद्धार गर्नलाई म तँसित छु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
21 “दुष्‍टहरूका हातदेखि म तँलाई बचाउनेछु, र निष्‍ठुरहरूका पन्‍जादेखि म तँलाई छुटाउनेछु।”
Jeremiah 14 Choose Book & Chapter Jeremiah 16